को-रोना लागेर निको भएका बिरामिमा देखा पर्यो यस्तो ख`तरनाक समस्या ! – Annapurna Daily
को-रोना लागेर निको भएका बिरामिमा देखा पर्यो यस्तो ख`तरनाक समस्या !
On May 17, 2021 35
काठमाडौँ-शनिवारको एउटा बिहान मुम्बईका एक नेत्र श-ल्यचिकित्सक डा. अक्षय नायर तीन हप्ताअघि को-भिड-१९ बाट निको भएकी एकजना २५ वर्षीया महिलाको आँखामा श-ल्यक्रिया गर्ने प्रतीक्षामा थिए। अस्पतालको श-ल्यक्रिया कक्षमा ती डाइबेटिक बिरामीको एकजना नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ चिकित्सकले पहिले नै जाँच गरिरहेका थिए ।
उनले नाकबाट एउटा नली पठाएर एक प्रकारको दुर्लभ तर ख-तरनाक ढुसी सङ्क्रमण म्युकोर्माइकोसिसबाट प्रभावित तन्तुहरू हटाइरहेका थिए । यो उग्र प्रकृतिको सङ्क्रमणले बिरामीका नाक, आँखा र कहिलेकाहीँ मस्तिष्कलाई पनि असर गर्छ। ती विशेषज्ञले आफ्नो काम सकेपछि डा. नायरले ती महिलाको आँखा नि-काल्ने काम गर्नेछन् । उनले भने,” मैले यी बिरामीको ज्या- न जोगाउन उनको आँखा झिक्नुपर्नेछ।
यो रोग यति विघ्न ख- तरनाक छ।”भारतमा को-भिड-१९ को घा-तक दोस्रो लहर चर्कँदै गर्दा चिकित्सकहरूले ‘कालो ढुसी’ भनिने एउटा दुर्लभ प्रकृतिको सङक्रमण को-भिड-१९ बाट निको भएका बिरामीहरूमा बढ्दो रूपमा देखिएको बताइरहेका छन् ।
म्युकोर्माइकोसिस एक प्रकारको निकै विरल देखिने सङ्क्रमण हो। यो सामान्यतया माटो, बोटविरुवा, मल र कुहिएका फलफूल तथा तरकारीमा हुने म्युकोर भनिने ढुसीसँगको संसर्गबाट सर्ने गर्दछ ।
नायर भन्छन्, “म्युकोर’ जताततै हुन्छ। माटो एवं हावामा र स्वस्थ मानिसको नाक र खकारमा पनि यो हुन्छ।” यसले साइनस, मस्तिष्क र फोक्सोमा असर गर्छ र यो प्राणघातक पनि हुनसक्छः विशेषगरी डाइबेटिक अथवा शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमतामा गम्भीर कमजोरी देखिएका क्यान्सर वा एच-आईभी ए-ड्सका बिरामीहरूका लागि।चिकित्सकहरूको विश्वासमा म्युकोर्माइकोसिस, जसको समग्र मृत्युकारक दर ५० प्रतिशत जति हुन्छ, स्टाेराेइट आैषधिकाे प्रयोगका कारण देखापर्न थालेको हुनसक्छ।
को- भिड-१९ का गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई ज्या-न जोगाउने औषधिका रूपमा हाल स्टेरोइडको पनि प्रयोग भइरहेको छ। स्टेरोइडहरूले को-भिड-१९ का बिरामीहरूको फोक्सोमा देखिने इन्फ्लामेशन अर्थात् सु-जनलाई कम गर्छन् र तिनले शरीरको रोगप्रतिरोधी प्रणाली को-;रोना भाइरससँग जुध्न अति सक्रिय अवस्थामा पुग्दा त्यसबाट पुग्नसक्ने केही क्ष- तिलाई रोक्न सघाउने देखिएको छ।
तर तिनले रोगप्रतिरोधी क्षमतालाई पनि कमजोर गराउँछन् र रगतमा चिनीको मात्रा, ब्लड सुगर लेभल, बढाउँछन्। यस्तो डाइबिटिज भएका वा डाइबिटिज नभएका दुवैथरी को- भिड-१९ का बिरामीहरूमा हुन्छ। यसरी रोगप्रतिरोधी क्षमतामा देखिने कमी नै म्युकोर्माइकोसिसको कारक हुनसक्ने ठानिएको छ।